Ho an` ny sasany, fotoana hieritreretana ny fiainany ny fijanoana an-trano, hakàna aina manoloana ny rotorotom-piainana, hanararaotana ny fanamafisanana ny fiainan-tokantranony, hoy ny Papa Ray Masina Fransoa. Ho an` ny hafa, dia manahy ny hoaviny amin` ny asany noho ny krizy ara-toekarena. « Mamporisika ireo tompon'andraikitra ara-politika aho mba hiasa mafy ho tombontsoan` ny rehetra. Mba hanao izay fomba rehetra na eo amin` ny fitaovana mba ahafahan` ny vahoaka miaina an-kahalalahana indrindra aorian` ny fiatrehana ny aretina”. Tsy fotoanan` ny fanavakavahana sy fanilihana intsony izao satria ny rehetra no mijaly ka tsy maintsy miray hina miatrika ny “coronavirus”. Tsy azo atao no mamela ireo mahantra tsy hisakafo sy tsy hanan-kohanina satria maro ireo sehatra naato. Toy izany koa ny fanafody, indrindra ny fanamorana ny fiantohana ara-pahasalamana sahaza. «Manoloana ny zava-misy, miantso ny iraisam-pirenena aho hanala ireo sazy samihafa amin` ireo firenena voakasika izany sy hanampy ny mpiara-belona amin` ny fanohana isan-karazana. Miantso ireo sehatra iraisam-pirenena hatrany mba hanamaivana ireo trosa an` ireo firenena marefo ». Nanamafy ny Papa Fransoa fa tsy fotoanan` ny fitaivan-tena na koa ny fisarasarahana izao.